मिस नेपालको ताज पहिरिदा नीकिताले किन झारिनन् आँसु ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२१ जेष्ठ २०७४, आईतवार १२:४७
उर्लाबारी मोरङकी २० वर्षिय नीकिता चण्दकले ‘मीस नेपाल २०१७’ को उपाधी हात पारिन् । मारवाडी समुदायबाट मिस नेपाल हुने पहिलो युवतीको रेकर्ड राखेकी उनले मिस नेपालसँगै मिस कन्फिडेन्ट र मिस पपुलरको ताज पनि पहिरिईन् । निकिताले मिस नेपालको ताज पहिरिएसँगै मिस वल्र्डमा सहभागिता जनाउने अवसर पनि पाएकी छिन् जुन उनको लक्ष्य नै हो ।
बिगत ६ वर्षयता भारतमा रहेर अध्ययन गर्दै आईरहेकी नीकिता मिस नेपाल हुनुभन्दा पहिले एक मोडल हुन् । उनले दुई वर्ष अघि परिवारको सहमती लिएर मोडलिङको सुरुवात गरेकी थिईन् । नीकिताले भारतको ‘जेडी इन्स्टिच्यूट अफ फेसन टेक्नोलोजी’मा फेसन कम्यूनिकेशनको अध्ययन समेत गरेकी छिन् ।
मारवाडी समुदयका महिलाहरु ग्ल्यामरबाट टाढै रहने भएका कारण नीकितालाई यो बाटोमा आउन निकै मेहनत गर्नु पर्यो । उनले आफ्नी दिदीलाई भनेर अभिभावकसम्म कुरा पुर्याएकी थिईन् । उनमा मोडल बन्ने चाहना थियो । तर यो कुरा घरुमा भन्दा आमा बुवा रिसाउने डर थियो । यहि कारण उनले यो कुरा परिवारसम्म पुर्याउन दिदीको सहयोग लिईन् । आफूले मोडलिङ गर्न थालेपछि आफन्तहरुले पनि राम्रो नमानेको नीकिता बताउँछिन् । ‘मिस नेपालसम्म आईपुग्दा त धेरै आलोचकहरु भए’, उनी थप्छिन् ।
नाच्न गाउन रुचाउने नीकिताले भविष्यमा आफूलाई एक कलाकारको रुपमा स्थापित गर्ने सोच बनाएकी छिन् । यसका साथै पछिल्लो समय लोकप्रियता घट्दै गएको ‘मिस नेपाल’को ताजलाई बर्षभरी आफ्ना कामका माध्यमबाट चर्चामा राख्नु नीकिताको मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
तपाईँले मिस नेपालकै प्ल्याट फर्म किन रोज्नु भयो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘म पहिले देखि नै मोडलिङमा थिएँ । हुन त मोडलिङ र ब्युटी प्याजेन्ट भनेको त धेरै फरक छ । तर यसमा भाग लिँदा हामीले आफ्नो समुदायको आवाज उठाउन सक्छौँ । हामीलाई धेरै युवाहरुले फलो गरेका हुन्छन् । उनीहरुको आवाजलाई उठाउन सक्छौँ । त्यस कारण मैलै मिस नेपालको प्ल्याटफर्म रोजेँ ।’
मिस नेपालको उपाधी जितेपछि धेरैको आँखामा आँसु हुन्छ । तर निकिताको अनुहारमा भने आँसु नभएर मात्र मुस्कान थियो । निकिताले मिस नेपाल हुँदा आँसु झार्ने ट्रेण्डलाई नै ब्रेक गरेको कुरा धेरैले गरे । तर स्वयम नीकिता भने आँसु नआउनु कारण बताउँदै भन्छिन्, बाल्यकाल देखि नै एकदमै धेरै चाहेको कुरा पाउँदा म ईमोशनल हुँदिनथेँ । सायद मिस नेपालको ताज पाउँदा पनि त्यहि भयो मलाई । त्यो दिन बिहानै देखि मेरो दिमाग एकदमै खाली थियो । म मा नर्भसनेस पनि थिएन र उत्सुकता पनि । अनि जब मलाई मिस नेपाल २०१७ घोषणा गरियो मलाई सपना जस्तै लाग्यो । भोली पल्ट उठेदेखि बल्ल मिस नेपाल भएको महसुस हुन थाल्यो ।
आफूले मिस नेपालको उपाधी जितेसँगै आफूमा धेरै जिम्मेवारी थपिएको बताउँदै नीकिता आफूले सबै जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउँछिन् । नीकिता अब एक कलाकारका साथै समाज सेवी बन्ने सोच सहित अघि बढ्ने तयारीमा छिन् । उनलाई फर्सीनेटवर्कको तर्फबाट सफलताको शुभकामना ।
छायाँछवि काव्य श्रृंखलाको तेस्रो सिलसिलामा गुञ्जिए कवि बसन्त प्रकाश र गजलकार शान्ति…